Mampiasa haino aman-jery ifaneraserana hampisondrotra ny fampiroboroboana B2C | Martech Zone
Mampiasa haino aman-jery ifaneraserana hampitomboana ny fampiroboroboana B2C anao
Alakamisy, Jona 16, 2016 Alakamisy, Jona 16, 2016 Muhammad Yasin
Na inona na inona indostria misy anao, raha ny sehatry ny B2C ny orinasanao dia tsara ny manjo anao amin'ny fifaninanana masiaka - indrindra raha fivarotana biriky sy feta ianao. Rehefa dinihina tokoa, fantatrao hoe ohatrinona ary impiry ny mpanjifa miantsena an-tserasera ankehitriny. Ny vahoaka dia mbola handeha hamonjy fivarotana biriky sy rihitra; fa ny fanamorana ny fividianana an-tserasera dia nahatonga ny isan'ireo mpiaro ny fivarotana. Iray amin'ireo fomba fanaovana raharaham-barotra manandrana manasitrana izany dia amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny dokambarotra - ho an'ny tapakila, lisitra vaovao, fihenam-bidy lehibe, sns... Na izany aza, ireo mpifaninana izay noresahintsika ireo ihany koa dia ny fampiroboroboana izay mahasarika…. raha tsy mahasarika kokoa noho ny anao.
Amin'izao fotoana izao, ny fampiroboroboana izay tantanan'ny orinasa dia tsy ampy hamelezana ny fifamoivoizana an-tsena na amin'ny fividianana an-tserasera mihitsy aza. Ny mpifaninana aminao dia mety hanao fampiroboroboana toa anao ihany - indraindray miaraka. Izany dia nilaza fa mpanjifa maro no hampiasa ny "harana" ho fanapahan-kevitra hanaraka na tsia miaraka amin'ny orinasao: azo itokisana miorina amin'ny hevitra an-tserasera, akaiky ny tranonao (raha fivarotana biriky sy feta), tolo-kevitra avy amin'ny namana iray ( hialana amin'ny fikarohana) ary ny traikefa (miaraka amin'ny fananganana voalaza) no tena fanapahan-kevitra lehibe indrindra. Raha fintinina dia mila miavaka ny fampiroboroboana anao.
Mba hisongadinan'ny fampiroboroboana ny marika dia mazava ho azy fa mila manao zavatra hafa ianao. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra anaovana izany dia amin'ny fampidirana ireo traikefa ifaneraserana ao amin'ny tranonkalan'ny marikao. Zava-dehibe ny traikefa ifaneraserana satria mamela ny marika hanararaotra manome torolàlana amin'ny fanapahan-kevitra lehibe na fividianana BIG. Manolotra ny marika ihany koa ny marika hampialana voly ny mpanjifany. Ireto misy safidy vitsivitsy ho an'ny traikefa ifanakalozana izay azonao ampidirina ao amin'ny tranonkalanao mba hampitomboana ny firotsahana, ary amin'ny farany, hampivoatra ny fiovam-po.
Ho an'ireo orinasa mivarotra vokatra sy serivisy "mihoa-pampana" izay matetika mitaky eritreritra be (fiara, fanaka, findramam-bola, sns.), Ny calculatera dia votoatin'ny fifandraisana be dia be izay afaka mitarika ny mpanjifanao hanaraka ny fanapahan-kevitry ny fividianana marina. Matetika ny fotoana, na ny mpanjifa mahay indrindra sy matanjaka ara-bola aza dia mila mihemotra hamantatra izay azony atao sy tsy zakany. Ny sasany amin'ny calculator fahita indrindra hitantsika dia: calculatera fandoavam-bola isam-bolana, fanaovana kajikajy zanabola ary fanaovana kajy fandoavam-bola.
Mazava ho azy fa tsy ny lafiny ara-bola ihany no antony mila kajikajy. Ny mpanjifanao dia mety mila manisa ny habaka azony omena ho an'ny fandriana vaovao. Na, mety hikajiana ny index index ny vatany, na ny lanjany mety, ny mpanjifanao mba hamaritana hoe inona ny programa fanatanjahan-tena mety amin'izy ireo. Ny teboka eto dia ny fanaovana kajy fanaovana kajy mora kokoa, satria manome isa sanda amin'ny isa maromaro izy ireo. Arakaraka ny maha tsara kokoa ny isa (na avo na ambany), ny fotoana tsaratsara kokoa ahitan'ny mpanjifa ny valintenin'izy ireo - ary izany dia matetika mitarika fikasana hividy.
Ny fikajiana kajy dia afaka manaporofo fa manararaotra izaitsizy ny mpanjifa mitady handray anjara amin'ny fampiroboroboana anao farany. Na dia azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra aza ny calculatera, ny fahaizana mahita valiny amin'ireo fanontaniana manan-danja dia manosika azy ireo hidina ao amin'ny fantsom-pividianana. Arakaraka ny fahafantaran'izy ireo ny toe-javatra misy azy ireo no vao mainka izy ireo maniry hividy. Ary raha misy ny fampiroboroboana (andao hoe, "Tsy misy fandoavam-bola mandra-pahatongan'ny 2017"), ny mpanjifa dia manandrana manisa izay azony omena amin'ny ho avy alohan'ny hanaovana fanoloran-tena toy izany. Vantany vao azony ny valinteniny, dia hividy izy ireo avy eo.
Indraindray ny tsy fahatapahan-kevitry ny mpanjifa dia tsy misy ifandraisany amin'ny vola (na kajy manokana); fa kosa, safidio madio. Rehefa atolotra safidy marobe ny mpanjifa (izay fahita indrindra mandritra ny fampiroboroboana), indraindray dia voasakan'ny fahaizana manapa-kevitra izy ireo. Toa hadalana izany, fa marina tanteraka. Ny mpanjifa sasany dia hilavo lefona fotsiny raha tsy afaka manapa-kevitra momba ny fividianana - indrindra raha fividianana lehibe. Raha tsy mifantoka tanteraka amin'ny zavatra iray ny mpanjifa dia ny eritreritr'izy ireo dia hoe “Eny, tsy tokony ho tsara noho izany. Fa maninona aho no handany vola mihoa-pampana raha eo amin'ny fefy aho? ” ary avy eo dia niroso izy ireo.
Ny traikefa amin'ny fanombanana dia fomba iray hafa hampiala ny mpanjifanao lavitra amin'ny fantsom-pividianana - indrindra indrindra raha ny momba ny fampiroboroboana an-tserasera anao. Satria ny fampiroboroboana matetika dia misy karazana vokatra manokana, serivisy na tolotra manokana, ny fanombanana dia afaka mitarika ny mpanjifa mankany amin'ny iray amin'ireo safidy azo atao.
Andao hampiasa vondrona auto ho ohatra. Araka ny efa fantatrao, ny vondrona fiara dia misy mpivarotra maromaro amin'ny faritra iray; ary ny mpivarotra tsirairay dia mivarotra karazana fiara (Toyota, Kia, Hyundai, sns.). Andao lazaina fa nandre zavatra tsara momba ity vondrona fiara ity ny mpanjifa iray; ary ny mpivarotra rehetra (ao amin'ny vondrona fiara) dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana "Tsy misy fandoavam-bola hatramin'ny 2017". Tsara sy mandeha daholo izany rehetra izany… mandra-pahitanao fa tsy azon'ny mpanjifa antoka tanteraka hoe manao / maodelin'ny fiara tian'izy ireo hiaraka izy ireo. Mba hitazomana izany mpanjifa izany tsy handeha amin'ny fivarotana hafa, ny vondrona auto dia afaka mametraka tombana amin'ny tranokalan'izy ireo hitarika azy ireo hanapa-kevitra momba ny fividianana. Ny karazana tombana tsara indrindra dia mety ho iray izay manome "maodely / maodely" ho an'ny mpanjifa miorina amin'ny valiny omen'ny mpanjifa - "karazana fiara tokony hitondrao ianao?" fanombanana.
Fomba iray lehibe hampiasana traikefa ifanakalozan-kevitra ho an'ny fampiroboroboana anao dia ny ATAOVANA fampiroboroboana ny traikefanao. Na inona na inona varotra hafa ataonao, azonao atao ny manentana ny mpanjifa hitsidika ny fivarotanao (na tranokala) miaraka amin'ny lalao Instant Win - manome ny vintana hahazoana loka Lehibe, ary manome tolotra na fanomezana fampiononana ho an'ireo olona tsy mandresy ny jackpot. Ireo traikefa ireo dia mety ahitana: masinina slot nomerika, kodiarana ahodinkodina (toy ny Wheel of Fortune) na traikefa hafa tsy mandeha ho azy izay mifidy mpandresy tokana loka lehibe. Ny loka na tolotra hafa (izay azo lazaina alohan'ny fandraisana anjara) dia mety ho zavatra sarobidy toy ny fakan-kevitra maimaimpoana, tsy misy fandoavam-bola isam-bolana, vola na 100 $ amin'ny fividianana $ 800 na mihoatra. Ny ampahany tsara indrindra dia ireo karazana traikefa ireo izay manintona tokoa, satria mampiroborobo ny fientanam-po izany ary mahalana vao mitarika mpanjifa tezitra na sorena. Ny zava-misy fa miala voly izy ireo ary "mandresy" zavatra iray dia lasa karazana traikefa ifaneraserana lehibe ity - miankina amin'ny indostria, mazava ho azy.
Ny karazana traikefa farany ifaneraserako izay ho hitako dia ny «quiz». Na dia tsy manolotra zavatra misy lanja azo tsapain-tanana aza ny quiz (amin'ny sandany azo tsapain-tanana, valiny, tolotra na loka no ilazana azy ireo), azon'izy ireo atao ny mamela ny mpanjifa hanana fahafaham-po amin'ny tenany. Amin'ny ankapobeny, rehefa mahatsiaro ho faly na mirehareha amin'ny tenany ny mpanjifa dia hilaza amin'ny namany izy ireo. Raha ny momba ny quiz (amin'ny endrika traikefa ifandraisana) dia hirona hizara ny valiny amin'ny media sosialy ny mpanjifa - ary hanohitra azy ireo mihitsy aza. Averina indray, na dia tsy misy aza ny tolotra "azo tsapain-tanana", ireo karazana traikefa ireo dia mahafinaritra amin'ny marika. Arakaraka ny fahalianan'ny mpanjifa ny fahalianan'ny mpanjifa no mahatonga ny marika fanta-daza kokoa - ary vao mainka te hahalala izy ireo fa manana izany marika izany. Ary raha ny fampiroboroboana dia ny fanontaniana apetrakao amin'io quiz io afaka maneho ny lohahevitry ny fampiroboroboana an-tserasera - izay vao mainka mitombo ny fahalianan'ny mpanjifa.
Iza amin'ireo karazana traikefa ireo no hahasoa anao indrindra? Lazao aminay ireo hevitra etsy ambany!
Tags: traikefa amin'ny dokam-barotrafifandraisan'ny mpanjifaContent Marketingatiny fifandraisanahaino aman-jery fifandraisanafampiroboroboana an-tserasera